Brogaram kuu suurto galinaya in aad la hadasho Ajaaniib adiga oo isticmaalaya Mopelkaga oo lasoo saaray - iftineducation.com
Brogaram kuu suurto galinaya in aad la hadasho Ajaaniib adiga oo isticmaalaya Mopelkaga oo lasoo saaray
aadan21 / November 1, 2012
iftineducation.com – Brograam cusub oo Turjumaya Hadalda la isku weydaarsado Taleefanada dadka luqadaha kala duwan ku hadla oo la soo saaray Turjumaad Dadgdag ah ee Kalmadaha oo mar dhaw diyaar ku noqonaysa suuqyada Caalamka.
Shirkada NTT DOCOMO ayaa soo bandhigtay Barnamij cusub oo turjumaad ah una suura galinaya dadka u dhashay Japan in ay kula sheekeystaan Ajaaniibta Taleefanadooda gacanta Si sahlan isaga oo qof kastaahina uu luqadiisa asalka ah ku hadlayo.
Barnaamijkaan oo ay soo ban dhigtay shirkada NTT DOCOMO oo ka mida shirkadaha ugu wayn Dalkaasi soona saara Taleefanada gacanta Wadanka Japan ayaa si dhab ah waxaa uu ubadalayaa Luqada Jabaaneeska Ingilish China iyo kuuriya, iyada oo ay socoto in lo sii kordhiyo luqado kale oo caalamka lagaga hadlo.
Barnaamijkaan casriga ah ayaa waxaa uu qeyb ka yahay silsilado Barnaamijyo ah oo samaynaya Turjumaada Dag daga ah iyada oo la isticmaalayo taleefanada gacanta.
Waxaan xusid mudan in shirkadaha LEXIFON iyo VOCAR ay horumarin ku wadaaan barnaamij kale oo la mida kan NTT DOCOMO, sidoo kalan shirkadaha ALCATEL-LUCENT iyo MICROSOFT ay wadaan tijaabooyin lagu sameynayao Turjumada Dagdaga ah.
Koldhaw haduu uu hirgalaa barnaamikaan waxaa shirkado farabadan ay ka maarmi Doonaan Turjumaanada faraha badan ee Luqadaha kala duwan taasi oo shirkadaha u keenaysa in ay lacago fara badan usoo laabtaan..
Barnaamijkaan ay soo bandhigtay NTT DOCOMO ayaa waxaa uu la shaqeynayaaa taleefanada ku shaqeeya Andriid ee caqliga leh, waxan uu si rasmi ah suuqa usoo galin doontaa horaanta bisha novembar ee manta bilaabatay.
Isticmaalaha waxaa barnaamijkaani usuura galinayaa in uu la hadlo qof uusan luqadiisa garanaynin, marka uu hadlaa inyar ayuuka joogsanaa hadalka si mashiinku uturjumaa qofka kalana loogu gudbiyaa isaga oo turjuman, waxaan ay ku dhacaysaa hooshaasi in ka yar hal sakan.
Bayaan ay shirkada so saartaya ayeey ku sheegtay in ay socoto qorshe loogu kordhinayo luqadaha uu turjumaa waxaan lagu soo darayaa bilaha soo socda Faransiiska Jarmalka Induniisiya talyaaniga Burtugaal isbanishka Iyo taylaan.
Bayaanka shirkada ayaa waxaa kale oo lagu sheegay in hada ay sura galiyeen in qof ka qof luqadiisa la isku turjumaa balse aya hada doonayaan in ay dhoor qof oo luqado kala duwan ku hadlaya ay wada sheekaysan karaan.
Waxaa hada Shirkada Google ay leedahay barnaamij isku turjumaya 17 Luqadood oo codadka turjumaya oo suura galinaya in wada sheekasyi toos ah wada yeelan karaan dad ajanaiib ah.
Kenya oo shaaca ka qaaday sir u qarsooneed Dowlada Ugandha oo ku aadaneed tirada Ciidamada Somalia looga dilay
Kooxaha Sportiga ee Ugu Qanisan Caalamka.